WhatsApp ကို uninstall လုပ်သင့်သည့်အကြောင်းပြချက် (၆) ချက်ရှိသည် Gadget သတင်း
WhatsApp ကို uninstall လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၆ ခုရှိသည်
WhatsApp ကို သုံးစွဲသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အတူဖုန်းနံပါတ်များအဖြစ်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသည့်အခါသုံးစွဲသူများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်လူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်းတွင်ယနေ့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်သုံးစွဲသူအများဆုံးသောလူမှုကွန်ယက်သည်ငွေအမြောက်အမြားပေးဆပ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးဝန်ဆောင်မှု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။
မနေ့ကရှင်းပြပြီးနောက် WhatsApp ကိုကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှမျှဝေခြင်းကိုမည်သို့တားဆီးရမည်နည်းဒီနေ့မင်းကိုပြချင်တယ် WhatsApp ကို uninstall လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၆ ခုရှိသည်.
3 မကြာခင်မှာပဲသူက Device အချို့မှာအလုပ်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး
4 WhatsApp ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ဒီအမျိုးအစားကပိုများတယ်
7 ထိုအကြားရှိနေသော်လည်းငါတို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်များကနေ uninstall ပါဘူး
သံသယမရှိဘဲ WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို Facebook နှင့် Facebook ပိုင်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်မျှဝေနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးသည်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ကို uninstall လုပ်ရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သင့်သည်။ ယခုအချိန်တွင်လူမှုကွန်ယက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအဘယ်ကြောင့်လိုချင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းအရာအားလုံးကကျွန်ုပ်တို့အားမက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်ကြော်ငြာများပို့ရန်အကြံပြုသည်။
WhatsApp ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းယူရိုငွေကိုမပေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည်မည်သည့်နည်းပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့အားကြော်ငြာမက်ဆေ့ခ်ျများကကျူးကျော်ရန်ခွင့်ပြုရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ ဟုတ်ပါတယ်၊ Facebook ကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမျှဝေရန်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မှာကြာမြင့်စွာစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။
WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသည်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှု၏တိုးတက်မှုများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ဤကဲ့သို့သောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများ၌ခဏတာရရှိနိုင်ပါပြီ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒီလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအရူးသွား၏, ဒါပေမယ့် အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများမှပေးသောအသံခေါ်ဆိုမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့လုံးဝတိုးတက်လာခြင်းမရှိဘဲအရည်အသွေးနိမ့်ကျသည် ဒီအမျိုးအစား
မကြာခင်မှာပဲသူက Device အချို့မှာအလုပ်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ WhatsApp ကစျေးကွက်အတွင်းရှိအချို့သောဆိပ်ကမ်းများကိုမထောက်ပံ့တော့ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက်ဥပမာအားဖြင့်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကအလွန်ရေပန်းစားခဲ့သော BlackBerry ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ယနေ့သူတို့၏စျေးကွက်ဝေစုသည်သုညသို့လျော့ကျသွားသည်။
ထို့အပြင်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုသည် Android operating system ရှိသည့်အချို့စက်များပေါ်တွင်လည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်သင်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ၎င်းသည်ဗားရှင်းဟောင်းများတွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ သင့်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဟောင်းရှိသည့်ကိရိယာရှိသေးလျှင်သတိထားပါ၊ ဖြုတ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါကအသေးစိတ်အားလုံးကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
WhatsApp ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ဒီအမျိုးအစားကပိုများတယ်
WhatsApp သည်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်မဖြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အချေအတင်ဆွေးနွေးမှုများသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့ပြီးယနေ့လူများစွာက၎င်းကိုယုံကြည်ကြသည်။ ကွေးနနျးစာ o လိုင်း Facebook ကပိုင်ဆိုင် app ထက်ဝေးသာ။ ကောင်း၏။
မကြာသေးမီက WhatsApp သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ဈေးကွက်တွင်ဤကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများရှိနေပြီးအချို့သည်ဥပမာ Telegram ကဲ့သို့သောကဏ္manyများစွာတွင် WhatsApp ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။ ငါတို့သူငယ်ချင်းများသည်ဤအပလီကေးရှင်းများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အသုံးအများဆုံး မှလွဲ၍ အခြားသူများအသုံးပြုနိုင်သည်ဟုမထင်တော့။
လက်တွေ့ကျကျ WhatsApp သည်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်စတင်သုံးစွဲနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အမှားများနှင့်အနည်းဆုံးအားဖြေရှင်းရန်မလိုသောချို့ယွင်းချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာပုံတစ်ပုံကိုပို့သောအခါပုံကိုမူလအရည်အသွေးဖြင့်ဘယ်သောအခါမျှပို့သည်မဟုတ်ပါ၊ အချက်အလက်များကိုများစွာမသုံးဘဲပို့ရန်၎င်းကိုလျှော့ချသော်လည်းမူလဓာတ်ပုံကိုရရှိခြင်းအားချက်ချင်းလက်ငင်းဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် WhatsApp တွင်ရှိသည့်အားနည်းချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Telegram နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အကယ်၍ သင်သည်ဥပမာအားဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွက် Facebook အရွယ်အစားကိုခွင့်မပြုသင့်သောအမှားအယွင်းအနည်းငယ်ကိုရရှိနိုင်သည်။
WhatsApp သည်လူများစွာအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်နောက်ခံသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင်ဤကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများတိုးပွားလာခြင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာများမှပေးသောနှုန်းထားများတိုးများလာခြင်းတို့၏ပုံသဏ္.ာန်
WhatsApp သည်အခြားအသုံးချမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြေနိမ့်ကျလာသည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်သကဲ့သို့တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုယုံကြည်ကြသည်။
ထိုအကြားရှိနေသော်လည်းငါတို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်များကနေ uninstall ပါဘူး
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည့်အကြောင်းပြချက်အချို့နှင့်အတူ၊ ၎င်းတို့သည် WhatsApp ကိုဖယ်ရှားရန်လုံလောက်သည်ထက်ပိုသင့်သော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေအနည်းငယ်သောထိုအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ရဲဝံ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏တယ်လီဂရမ်ကိုအသုံးပြုသောကြောင့် Facebook ပိုင်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုလက်တွေ့အသုံးမပြုတော့တော့ကြောင်းကျွန်ုပ်ဝန်ခံရမည်။ သို့သော်၎င်းကိုဖယ်ရှားခြင်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။.
ငါနှင့်စကားပြောရန်ခက်ခဲသော်လည်းဤကဲ့သို့သောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကိုမသုံးသောသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးများကအဓိကအကြောင်းပြချက်များဖြစ်သည်။ WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပြီးမည်မျှတိုးတက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမျှဝေရန်ရှက်စရာမလိုဘဲမည်မျှတိုးတက်သည်၊ မည်မျှပင်မရှုတ်ချစေကာမူသုံးစွဲသူအနည်းငယ်သည် ၄ ​​င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များမှအမြဲတမ်းဖယ်ထုတ်ခြင်းအဆင့်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
WhatsApp ကို Device မှစဉ်းစားဖူးပါသလားသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ဖူးပါသလား။။ ဤစာမူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » WhatsApp ကို uninstall လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၆ ခုရှိသည်
တစ်ခါက WhatsApp ကို uninstall လုပ်ပြီးကျွန်ုပ် account ကိုဖျက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါပြန်လာရတော့မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကြေးနန်းပုံမှန်သုံးသည်၊ ကျွန်ုပ်အမေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်ရန်ကြေးနန်းကိုသာသုံးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များမှမည်သူမျှမကြာခဏအသုံးပြုလေ့မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်လျှောက်လွှာတစ်ခုနှင့်ဤမျှများစွာပိတ်ထားပြီးအခြားရွေးချယ်စရာများကိုမကြိုးစားပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ iphone မှာကျတော့ ၀.၉၉ ကျတယ် ဘာမှအခမဲ့ မိသားစုအများစုမှာဒီအက်ပလီကေးရှင်းကိုသာပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါ။ ထိုအခါငါသူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးကိုရပ်တန့်ချင်ကြဘူး။ အဲဒါအတွက်ပဲ!
ဒီအပေါ်သူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသောစစ်တမ်းကောက်။ အကယ်၍ သင်၏အချက်အလက်များကိုမဖော်ပြလိုပါကကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အရာအားလုံးသည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကူးယူသည့်စက်ရုပ်များရှိသဖြင့်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုစွန့်ပစ်ပါ။ အကယ်၍ နည်းပညာမရှိသောဝေးလံသောနေရာတွင်သင်သွားလိုလျှင်နည်းပညာနှင့်သင်၏ဒေတာအားလုံး ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ရမည်။ ဟားဟား…..
LG N20 တွင် Android Nougat ရှိသည်ဟုဝါကြွားသော LG VXNUMX အသစ်ကိုတီထွင်လိုက်သည်